Injani Le Okuhlangenwe Kuhle Ukuze Sibe Ngo Switzerland | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Injani Le Okuhlangenwe Kuhle Ukuze Sibe Ngo Switzerland
ngu Karolina Klesta
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 06/11/2020)
Ah, Switzerland, izwe elihle futhi elinokuthula lihleli kahle phakathi Italy, France, futhi Germany. Kuyafaneleka ukuvakashelwa ukubona ukuthi kungani iSwitzerland ilinganiswa ngokungaguquguquki njengelinye lamazwe ajabule kakhulu emhlabeni. Ngakho yini efika engqondweni yakho lapho ucabanga 'Switzerland '? I am ukuqagela iziqongo ezilele iqhwa, ushizi, futhi ushokoledi. Kuyoba khona inala isikhathi ushokoledi futhi fondue ku-Swiss yakho vacay, kodwa uqiniseke ukuthi ufaka phakathi yonke kwamasiko, yemvelo, futhi avelele zomlando leli lizwe oluyohlala. Kusukela yeqhawe ugibele isitimela entabeni udabula ukuba izakhiwo emhlathini-bephonsa, Switzerland inokuthile ukunikela esazo zonke isihambi ngesikhathi yonke isizini. Ake sinqamule eminye kumele-dos yakho uhambo Switzerland.
Hamba nge- zemininingwane
Izincwajana zemininingwane travel yindlela emangalisayo ukubona kuleli zwe elincane. Ukuqasha imoto futhi ezithothene komgwaqo kungaba ifomu akukhetha zokuthutha emazweni amaningi, kodwa ehamba ngesitimela e-Switzerland yintfo yisakhiwo sodumo! Izitimela zihlanzekile, ngesikhathi, bahambe ezinye kakhulu kwenkundla obumangalisayo emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, ezinye izindlela isitimela kusadingeka kakhulu kahle walondoloza, mlando isitimela izimoto ukuthi kuzokwenza uzizwe sengathi wena i-movie ubudala! Eminye yemizila edume kakhulu zihlanganisa Jungfraujoch, the GoldenPass Line, kanye Glacier Express. Ezinye zalezi imizila afakiwe ne Eurail Pass, futhi abanye ukuthi akuzona ngeke anikele izaphulelo Eurail Pass abanikazi. Izitimela eSwitzerland akuzona ezishibhile njalo, ngakho ukuhlela kancane kusengaphambili kungakusiza ngisindise abathile Francs, ngisho ngabe ukuhamba unqamule izwe noma nje ukuthatha uhambo day!
I-Basel ukuze ihlukaniswe iSitimela
UBern ukuze axhumeke ngesitimela
I-Lucerne ukuze ixhumeke ngesitimela
I-Zurich izogxiliswa isitimela
Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland ungomunye yisakhiwo sodumo kakhulu izindawo ezemidlalo ebusika emhlabeni. Cabanga izinsuku emithambekeni, nobusuku obuthathu curled up inkomishi efudumele itiye endishini esishisayo isobho nokunjengoshizi. Uma kusuka isimo sezulu esifudumele futhi angikaze skied ngaphambi, ebusika uhambo kanje kungenzeka kubonakale sengathi into ozibona movie. Ungafunda zokushushuluza kunini empilweni yakho ne-Switzerland unemisebenzi zokungcebeleka ukuthi kukhona ilungele Wabasaqalayo, nge ski izifundo kanye bunny amagquma. zokungcebeleka eziningi ngisho ukunikeza izifundo ngoba izingane, okwenza Switzerland i indawo enkulu imikhaya ukuya ku ski uhambo!
IZurich eya eSt Moritz Sitiketi samathikithi
I-Zermatt eya eSt Moritz Sitiketi
Amathikithi eSyon ukuya eSt Moritz
I-Basel to St Moritz Sitiketi
Caves kukhona hhayi into yokuqala ngangicabanga lapho mina uhlela uhambo yami Switzerland noma. Nokho, Switzerland has eminingi amahle othakazelisayo ukuvakashela, ikakhulukazi phakathi nezinyanga zasehlobo ezifudumele.
I-Zurich kuya ezikhathini zezitimela zeZermatt
IGeneva ezikhathini zezitimela zeZermatt
Bern ukuya ezikhathini Zermatt Isitimela
Lucerne kuya eZermatt Izikhathi zeSitimela
Lokhu emigede esikhulu has a echibini futhi eliqatjhiweko ngaphakathi ezingaba empeleni ihlanganise mayelana 400 abantu futhi kuqashwe ukuze izenzakalo ezifana lezitsha sokudla, amaqembu, nasemishadweni. Imicimbi lapho isici DJs, abadansi, nabaculi. Ungathatha isitimela yomlando kusukela Vitznau endaweni ehlukile. iwebhusayithi wabo kuphela German, kepha ungasebenzisa i-Google Chrome ukubheka noma yimaphi amawebhusayithi olimi lwangaphandle ukuthola eminye imininingwane yokuhamba - ungavula ukuhumusha okuzenzakalelayo!
St. ujabule Qaphela
I-St. Beatus emhumeni kuyinto izandla phansi omunye umxhwele kakhulu emhumeni izinhlelo kuleli zwe. Vula kusukela kuqala ngesonto ka Mashi ukuze ngesonto lokuqala Okthoba, lena uya khona ephelele ngabanye noma amaqembu abantu abavakashile entshonalanga Switzerland ezinyangeni zonyaka ezifudumele. Ungakwazi ukuhlola emhumeni wedwa, noma bahlanganyele on omunye guided izinkambo ukuthi kwenzeke njalo usuku lonke. Izinja wamukelekile ukuba ahambe nawe emhumeni kanye, kodwa uzodinga ukuthenga ithikithi emnyango ngabo! Emananini yokungena (ngoba abantu kuphela, sorry) kuyinto yokwemukela St Beatus emhumeni Museum, okuyinto uyonifundisa umlando, temdzabu, yokwakheka komhlaba kohlelo emhumeni!
Titlis Glacier Umgede
Lesi isikhathi sasebusika. emihumeni Glacier, owaziwa nangokuthi u-ice emihumeni, awavamile lokhu kufinyeleleke. Ukuvakashela leli emhumeni otherworldy wenza ama-ice wasendulo kumelwe nakanjani umuntu ukushushuluza eduze Engelberg. Bundle phezulu yakho izingubo olufudumele ebusika futhi traipse ngokusebenzisa imihubhe emhumeni okwesibhakabhaka-hued kwenziwa ngokuphelele kusukela ice!
Vakashela Omunye Uhlobo Museum
Wonke amadolobha amakhulu has a umlando noma imnyuziyamu yesayensi enhle kakhulu ngayo ukugqekeza kwedolobha nezinsuku zemvula. Nokho, ezinye izindawo babe ngempela iminyuziyamu esiyingqayizivele ukuthi umane akufanele ezingabanjwanga. Abantu abasuka kuwo wonke umhlaba ukuze uvakashele H.R. Geiger Museum e Gruyere.
H.R. Geiger kuyinto umdwebi odumile Swiss ukuthi Kuyaziwa emhlabeni wonke ukuze umsebenzi wobuciko yakhe macabre futhi Futuristic. Ungase umazi njengomakhelwane umculi owadala Izidalwa Alien movie. Uma uthanda ongaziwa, quirky art Gxila Geiger Museum futhi silandele it up nge cocktail ibha Geiger evumelanisiwe esitolo esiseceleni. Hhayi ujwayelene art yakhe? Thatha uhambo olubonakalayo Museum ngaphambi uya.
ILyon ukuya ezikhathini zesitimela saseGeneva
I-Zurich kuya eGeneva Isitimela izikhathi
I-Paris ukuya ezikhathini zeSitimela eGeneva
Lucerne kuya eGeneva Izikhathi zesitimela
Bazitike Indawo Efanelekela Fondue
Fondue kuyinto omunye izitsha edume kakhulu oyophuma Switzerland, futhi lokhu akukho ngozi. Abantu bebelokhu kudla shizi encibilikisiwe lwebhodwe ohlanganyelwe amakhulu eminyaka engxenyeni esentshonalanga elikhuluma isiFulentshi yeSwitzerland. Nokho, ngabo-1930 Okhahlamba Ushizi Union ngobudlova akhangiswe lokhu dish kokubili kuzwelonke nasemhlabeni wonke, ekumemezeleni ke isidlo kazwelonke yeSwitzerland njengendlela ukuthengisa overabundance wezwe we ushizi. Futhi siyajabula benza, ngubani ayithandi ushizi elicibilikile nesinkwa? Matanisa fondue yakho nge ezomile iwayini emhlophe, futhi uqiniseke ukuthi kabili cwilisa!
I-Basel ezikhathini zezitimela zaseZurich
I-Basel ezikhathini zezitimela zaseGeneva
I-Basel kuzikhathi ezihlanganisiwe zesitimela
I-Basel ezikhathini zikaBern isitimela
Do not Forget About the Chocolate
sekuyisikhathi sokuba le real isizathu sokuthi uya eSwitzerland – ushokoledi! Switzerland kuyinto ngempela idume ushokoledi yayo, futhi ungathola ophololi abaningi bakanokusho emakhoneni emigwaqo yonke indawo ezweni, Nokho, Zurich idume zayo eziningi ushokoledi izinkambo. Kukhona uhambo lweshokoledi oluya zilingane zonke izabelomali! Ungathatha uMgqibelo uhambo lokuhamba ekuseni ehlanganisa okuvelele kwedolobha namanye oshokolethi abahamba phambili edolobheni. Ungase uzame ngokuthatha uhambo lwe-a chocolate imboni encane, futhi nakho okwenza eyakho ushokoledi ibha. Ukuze uthole umsebenzi ehlobo zikanokusho ngempela, ukuthatha ushokoledi Uhambo ngesikebhe kuya Lindt futhi Sprungli kwemboni.
Ihunyushwe kuzikhathi zezitimela zaseZurich
Lucerne kuya eZurich Izikhathi zezitimela
Bern ukuya ezikhathini Zurich Isitimela
IGeneva kuya kwezikhathi zezitimela zaseZurich
Hamba phezulu yeYurophu
Kulungile, manje ukuthi ugcwalise futhi chocolate noshizi, kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba uthole ezihambayo futhi! Izintaba Swiss akuzona nje for Ukushushuluza ebusika! Bangu obumangalisayo Kuzonyuka ehlobo ukuthi ungaya ku nxazonke ezweni, kodwa esifundeni Jungfrau kufanele kube phezulu ohlwini lwakho ebhakedeni. I Jungfraujoch kuyinto iphuzu esiphezulu e-Europe ngezinye 3,454 amamitha (~ 11.330 izinyawo) nokubuka akufanele ezingabanjwanga. Kukhona ujantshi ozokusa lapho unyaka wonke uma ungeyena umuntu othatha izintaba omkhulu, noma uvakashela ebusika. Uma i-inselele uhlole ezinye zalezi imizila esifundeni. Abaningi nemizila babe ukudla kanye isiphuzo esihle izikhungo endleleni, ngakho ungakhathazeki, ngeke kudingeke ukuba ke anolaka!
Ninazo nezindawo eziyizintandokazi eSwitzerland? Sazise futhi Ungakhohlwa, website engcono Oda Uqeqesha amathikithi kuyinto Gcina Isitimela
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-experiences-switzerland-winter-summer%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / zh-CN ukuba / ja noma / futhi ngezilimi ezingaphezu.
I am traveling the world with my husband Patryk and daughter Mia. My main goal is to inspire others to live their lives to the fullest and never stop chasing their dreams! - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze ngithinte
Indlela Izikhangibavakashi Ngokuphepha Phakathi coronavirus Outbreak